मुख्यमन्त्रीसँग 'हाम्मा कुडा’- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
मुख्यमन्त्रीसँग 'हाम्मा कुडा’
(कालिकोट) — ‘मुख्यामन्त्री भयादै कालिकोटका लागि क्याक्या अरेउ ? सबै भन (मुख्यमन्त्री भएपछि कालिकोटका लागि के–के गर्नुभयो, सबै भन्नुहोस्),’ खाँडाचक्र ५ का ७३ वर्षीय विष्णुबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पहिलो प्रश्न तेर्स्याए ।
मुख्यमन्त्री शाही पनि के कम ? उनले स्थानीय लवजमै जवाफ फर्काए, ‘लाग्न त लाग्याकै छु, जनताकन महसुस हुन्या अरी त केई भयाको नाइँ (लाग्न त लागेकै छु, जनताले महसुस गर्ने गरी भने केही भएको छैन) ।’
‘हाम्मा कुडा, हाम्मा मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रमको पहिलो शृंखला गृहजिल्लाबाट थाल्दा मुख्यमन्त्री शाहीले धेरै प्रश्नको सामना गरे । उनलाई स्थानीयले आफ्नै लवज र शैलीमा आफ्ना कुरा निर्धक्क राखे । जनतासँग जनताकै दैलोमा साक्षात्कार गर्ने यो कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश सरकारले यसै वर्षदेखि सुरु गरेको हो । कालिकोटको मान्ममा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीयको उत्साहपूर्ण उपस्थिति थियो । उनीहरूले मुख्यमन्त्रीसँग आफ्ना जिज्ञासा, गुनासो, समस्या राखे । मुख्यमन्त्रीले पनि जनतासँग सहज रूपमा साक्षात्कार गरे । ‘तुम्मा जनप्रतिनिधिकन भ्रष्टाचार नअन्न निर्देशन दिएर जानुपड्यो,’ जिविसका पूर्वउपसभापति सत्यबहादुर शाहीले भने, ‘कर्णाली प्रदेश भ्रष्टाचारको अखडा भयो भन्ने सुनिन्छ, सुधार्नु पड्यो ।’
शिक्षामा गुणस्तर नभएको, शिक्षक दरबन्दी कम भएको, जनताले स्वास्थ्य सेवा नपाएको, सडक गतिला नबनेका, स्थानीय तहमा मनपरी भएको, द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको जस्ता विषयमा स्थानीयले गुनासो गरेका थिए । ‘महिला उद्यमीलाई कोसेली घर निर्माण गर्ने भनेको कता अलपत्र पर्‍यो ?’ दाहाँकी मीना शाहीले सोधिन् । प्रसूतिका बेला स्थानीय महिलाले ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन् । ‘कालिकोटमै फलाउन सकिने टमाटर, काउली, आलु तल (सहर) बाट आउँछन्, त्यहाँबाट आउनुपर्ने डाक्टर किन आउँदैनन् ?’ उनले प्रश्न गरिन् । यो प्रश्नले मुख्यमन्त्रीलाई गम्भीर बनायो ।
प्रदेश सरकारबाट आएको अधिकांश बजेट दुरुपयोग भएको कांग्रेस नेता दमनबहादुर शाहीले बताए । विकासको सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा भेदभाव नगर्न उनले मुख्यमन्त्रीलाई सुझाए । मुख्ममन्त्रीसँगै एउटै मोर्चामा सशस्त्र द्वन्द्वमा सामेल घाइते, अपांग र सहिद परिवारका सदस्यले पनि गुनासो पोखे । स्थानीय शान्ति समितिका संयोजकसमेत रहेका मालकोटका ध्रुवविक्रम शाहीले भने, ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा ‘क’ श्रेणीमा परेको कालिकोटलाई तपाईंकै सरकार आएपछि बेवास्ता किन गरियो ? द्वन्द्वपीडितले पाएका सुविधा किन कटौती भए ?’ पलाताका धनलाल महताराले सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने गरे पनि उक्त भत्ता छोराबुहारीले नदिने गरेको गुनासो गरे । पचालझरना, रास्कोट, सान्नी त्रिवेणीलगायत स्थानीय तहको साताव्यापी भ्रमणपछि मान्म आएका मुख्यमन्त्री शाहीले जनताले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिए । साथै सर्वसाधारणले गरेको गुनासा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
आफू मुख्यमन्त्री भएर आएपछि गाउँगाउँमा कृषि सडक पुर्‍याउन बजेट विनियोजन गरेको र लैंगिक असमानता हटाउन छोरीका लागि बैंक खाता खोलेर २० वर्षसम्म मासिक ५ सयका दरले रकम जम्मा गर्न थालेको उनले बताए । कर्णाली करिडोरलाई द्रुतमार्ग बनाउने, विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणलाई सबै जिल्लामा पुर्‍याउने र स्थानीयलाई सहुलियत दरमा ऋण दिएर आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ । ‘कसैले विकासमा बेवास्ता गर्छ र अनियमितता गर्छ भने त्यसलाई कुनै हालतमा सहिन्न,’ उनले भने, ‘हाम्मो प्रदेश हामीले बनाउने हो, अरू कोही आएर बनाउँदैन ।’
प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ १०:०२
रौतहट — बाढी र डुबान हेर्न रौतहट आउँदा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले विशेषज्ञ चिकित्सक नभएकाले गौर अस्पतालमा बिरामीलाई समस्या परेको सुनाए । सँगै आएका नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालले तत्कालै चिकित्सक पठाउन मन्त्री यादवलाई अनुरोध गरे ।
स्वास्थ्यमन्त्री यादवले चिकित्सक पठाउने आश्वासन दिएको झन्डै महिनापछि पनि गौर अस्पतालमा कोही डाक्टर थपिएनन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूले चिकित्सक पठाउने आश्वासन अझै पूरा नभएको बताएका छन् ।
सदरमुकाममा रहेको सरकारी अस्पतालमा दुई वर्षदेखि विशेषज्ञ चिकित्सक छैनन् । ९ जना विशेषज्ञको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा हाल एकजना डाक्टर मात्र कार्यरत छन् ।
‘मन्त्रीज्यूलाई यथार्थ कुरा राखेको हुँ । पठाउँछु भन्नुभएको थियो,’ सीडीओ थापाले भने, ‘चिकित्सक नभएकाले उपचारमा समस्या छ । मानिसहरू प्रशासनमा चिकित्सकका लागि पहल गर्नुपर्‍यो भनेर आउँछन् ।’
झुन्खुनवाका शेख तैयबले आफ्नो छोराको उपचारका लागि गौर अस्पताल ल्याए पनि चिकित्सककै कारण घन्टौंसम्म कुर्न बाध्य भएको सुनाए ।
५० शय्याको सुविधासम्पन्न भनिएको अस्पतालमा एक जना डा.कृष्ण साह मात्र विशेषज्ञ चिकित्सकका रूपमा कार्यरत छन् । साह अस्पताल प्रमुख पनि हुन् । त्यस्तै, मेडिकल अफिसर ४ र डेन्टल सर्जन १ जनाको दरबन्दी रहे पनि एक जना पनि छैनन् । मन्त्रालयले अफिसरको दरबन्दीमा करारमा राखेको छ । डा. रञ्जन सिंह र परबेज आलमलाई करारमा राखे पनि उनीहरूको म्याद सकिएको छ ।
अस्पतालको ल्याब टेक्निसियनमा ३ जनाको दरबन्दी भए पनि एक जनाले धानेका छन् । मन्त्रालयमा कर्मचारी अपुग भएको भनेर पत्राचार गरेको धेरै समय भएको डा.साहले सुनाए । अस्पतालको सेवा प्रभावित हुँदै गएको भनेर चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ । यहाँ उपचार सेवा राम्रो नभएको भन्दै बिरामी भारत र चितवन जान बाध्य छन् । प्रतिदिन सयभन्दा बढी बिरामी अस्पताल आउने गरेका छन् ।
प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ १०:००